प्रियंकाले लगाएको मंगलसुत्र यसकारण विशेष छ, मंगलसुत्रको डिजाइन’कर्ताले खुलाइन् सबैकुरा (भिडियोसहित)
May 9, 2020 3819
हालै नायिका प्रियंका कार्कीले धुमधामसँग विवाह गरिन् । नायक आयुष्मान देशराज जो’शीसँग विवाह गरेकी हुन् । वि’वाह पछि कोरोनाका कारण लकडाउनको घोष्णा गरिएपछि उनको जोडी अहिले घरमै छ । फिल्मी का’र्यक्रम सबै बन्छ छन् त्यसैले उ’नीहरु विवाह पछि किनेको आफुहरुको भैसेपाटी स्थित नयाँ घरमा बसेका छन् ।
प्रियंका र आयुष्मानको प्रेम सम्व’न्ध धेरै कारणले पहिल्यैदेखि चर्चा एवं गसिपको विषय बनि’रहेको थियो । बैंकर रविना देशराज’का छोरा आयुष्मान प्रियंकाभन्दा ६ वर्ष कान्छा हुन् ।
विवाह पछि प्रियंकाले सार्वजनिक गरेका तस्बि’रमा एउटा वस्तुलाई निकै फोकस गरिएको थियो । त्यो हो उनले लगाएको मंगल’सुत्र । उनले हरेक तस्बिरमा आफुले लगाएको मंगल’सुत्रलाई विशेष ख्याल गर्थिन ।
लाग्थ्यो उनले त्यो उनले प्रदर्शन गर्न चाहेकी छन् । उनले त्यस’लाई विशेष महत्व दिए’को प्रतित हुन्थ्यो । वास्तवमा के महत्व छ उनले लगाएको त्यो मंगलसुत्रको ? विवाह भएको धेरै सम’य पछि अहिले त्यस’को चर्चा सुरु भएको छ ।
उनले लगाएको त्यो मंगलसुत्र हगंकगंवाट मगाइए’को थियो । त्यसको मुल्य एक लाख ५० हजार बताइएको छ । माया मंगलसुत्र नाम दिइएको त्यसको के बिशेषता छ ? सोही मंगल’सुत्रकी डिजाइन’कर्ताले त्यसको महत्ववारे बताएकी छन् ।
प्रियंकालाई एक’पटक उनको जन्मदिनमा आयुष्मानले टाँगामा राखेर शहर परिक्रमा पनि गराएका थिए । सामाजिक सञ्जाल’मा उनीहरुका अन्तरंग तस्वीरहरु लगा’तार आइरहे । फिल्म करिअर ओरालो लाग्दै गए पनि प्रियंकालाई यही लभ अफेयरले गसिपमा टिकायो ।
सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो जोडी’लाई लिएर अनेक ट्रोल बन्दै आएका छन् । आयुष्मानलाई ‘चुसेको आप’को संज्ञा दिनेदेखि प्रियंकाको अघिल्लो श्रीमा’नसँगको तस्वीर र अन्तरवा’र्ताहरु सेयर गरेर फ्यानहरुले उनीहरु’लाई जिस्क्या’इरहे । तर, जति जिस्क्याए पनि प्रियंका(आयुष्मानको शैली फेरिएन । बरु उनीहरु ट्रोलमै रमाए र फन्डाह’रुको सिलसिला जारी राखे ।
बिहेको केही दिन अगाडि प्रियंका आफ्ना ५(६ जना साथीहरुलाई लिएर ‘ब्याचलर पार्टी’ गर्न थाइल्यान्ड पुगिन् । आयुष्मान पनि के कम ? उनले प्रियंका’का केटी साथीहरुकै पोज र ड्रेसअ’पमा आफ्ना केटा साथीहरुसित फोटोसेसन गरेर सार्व’जनिक गरिदिए । विवाह’को अघिल्लो दिन कोर्ट म्यारिज गर्नु पनि यो जोडीको ‘एटेन्सन सिकिङ’ कै प्रतिबिम्ब थियो ।
जे होस्, यी सबै सिलसिलाहरुको पटाक्षेप गर्दै प्रियंका र आयुष्मान श्रीमान-श्रीमती बनिसकेका छन् । प’हिलो वै’वाहिक सम्वन्ध दुई वर्षको अल्पायूमै टुक्रिए पनि प्रियंकाको दोस्रो दाम्पत्य जीवन लामो समय टि’कोस् भनेर धेरैले शुभकामना दिइरहेका छ’न् । भिडि’यो हेर्नुहोस्
Prevशरीरको कुन अंगमा भएको कोठीले कस्तो अर्थ राख्छ ! यो पढेर थाहपाउनुहोस्..
Next२ हप्ता अघि कोरोना संक्रʼमित भएका ‘भद्रʼगोलका बेलासे’ अस्पतालबाट घर फर्किए
प्रचण्ड समुहले ट्याक्सीसँगै मलाई पनि जला,उन खोजे, भागेर बाँचे भन्दै चालक रुदै मिडियामा (भिडियो)